Russia kumarudzi ivepo, akarwa muArabhu. First kwaiva Pechenegs. Muzana XII remakore kuti yatsiviwa Polovtsy. Wokupedzisira chinozunguzirwa kwakaita kuti nyika Russian eMongolia zhinji.
Kurwisa Polovtsy kwakaitika panguva enyika kusabatana kumabvazuva Slavs. Machinda kanoverengeka vakaenda inowanzorimwa, asi kakawanda, nekusiyana, vakarwira nyika yavo. Sei, nyaya idzi dzose, yakakurumbira zvikuru danidziro Prince Igor kuti Polovtsy? Nekuti ndiye sehofisi mabviro akakurumbira mabhuku Monument. Ndiyo "Lay."
Prince Igor kuti akaberekwa muna 1151. Akanga mumiririri Chernigov bazi Rurik dzinza. Pazera makore 29, akagara nhaka guta Novgorod-Seversky. Nyika kumativi ose zvakananga parutivi inowanzorimwa vanogara.
machinda Russian kazhinji zvakachinja ayo mutemo panyaya Polovtsy: vakayanana uye sungano kana hondo. Saka pamwe Igor. Dzimwe nguva vakaripira muArabhu panguva internecine hondo nemhuri. Asi uri ndima nevaya vari kurwa khans. Somuenzaniso, muna 1171, akaputsa Konchak pakati rwizi Vorskla. Zvisinei, nhoroondo mukurumbira atora mumwe rwendo.
Mushandirapamwe pamusoro inowanzorimwa
Muna 1185 machinda kumaodzanyemba kweRussia vakabatsirana kuenda inowanzorimwa muputse ipapo Polovtsian. Igor aiva initiator kuti rwendo urwu. Akanga rinotsigirwa chinotevera hama. Yaiva Vsevolod Svyatoslavich (Kursk muchinda), Svyatoslav Olgovich (Prince Rila) uye Vladimir I. (Putivl Prince). Uyewo pasi Mireza Russian vakamira Covo. Yakanga rudzi duku muArabhu, aigara ari kumiganhu chernihiv pfuma.
Mauto akabatana vakanga kunyimwa vatsigiri vakawanda. danidziro Prince Igor pakurwisana Polovtsian akapfuura pasina vatsigire Kievan muchinda Svyatoslav. Chikonzero chaiva chokuti gavhuna Seversky achimhanyira vakasarudza kumirira simba mutsigiri, iyo chete kuenda echiShinto. Kurumidzai Papera wakapata chinouraya basa kutapwa mauto. Hondo vakaenda pamahombekombe Donets, apo Polovtsian mumusasa nokuda izvo zvaaigona zvakanaka zvisingabatsiri.
Pashure pemazuva mashoma munzira yeuto Russian vakagumburwa pamusoro diki yokuzviparadzanisa romuvengi, iyo yakakundwa. Ndokudzokera misoro wavarwi. Machinda vakasarudza kuti sezvo nguva rombo pakutanga, kuti munguva yemberi chichabudirira. Kuti kwaiva kukanganisa. danidziro Prince Igor pakurwisana Polovtsian akatsaukira kukundikana nokuda kunayisa uye adventurism.
Mauto akasangana hondo chikuru muArabhu, yakanga pakarepo akapoteredzwa nokuda kusanganiswa ukuru muvengi. Vakanga vava Masoja Russian vakaurayiwa, vashoma kutiza. Kundikana kurwisa Prince Igor Polovtsian akatendeuka kuti musungwa iye. Tiza pakutapwa akanga pashure akapukunyuka murima riri bhiza akagadzira makore mashomanana chete.
Kudzoka kwidza polovtsev
Mushure mukuwana muArabhu dzinozivikanwa chairuramira kuRussia: vaibira uye preying. danidziro Prince Igor pakurwisana Polovtsian akaita vanotyisa nechisimba emakore havana kuziva zvavo. Rakanga dzichapambwa uye akapisa guta Ream uye mumisha yakanga yakavakidzana nowedu. Muchinda Kiev, uyo rakava ari inowanzorimwa nokuti kuti vatsigiri aikurumidza kubvuta laurels ose vakundi, akaita vabatana pamwe mutongi Galician, uye akadzinga muArabhu. Mukuwedzera, vatasvi haana akatambura pamusoro yokumwe pamberi chando. With veMubatanidzwa chando ivo vakanyangarika uye kumba, vakatakura upfumi chakabiwa ari muchitima.
Svyatoslav (Muchinda Kiev) pakutanga akatsamwa Igor, nekuti akaenda inowanzorimwa pakavanda shamwari. Zvisinei, pashure zvakazivikanwa kuti anotambudzika mukuru rakanga ratorwa, hama kukanganwa chigumbu kwenguva achema kwaari, vachifunga kwete kuti aizodzoka.
Makore mashomanana gare gare yokufamba Novgorod-Seversky Prince Igor Polovtsian kuti vasatora hwaro yakakurumbira "Mashoko ...". Munyori ari mabhuku nhaka harizivikanwi. Artwork chishamiso akapona uye akava akakurumbira chaizvo chete XIX remakore, kana vanhu vacho mazita rakanyorwa nevanhu Count Musin-Pushkin.
Uyu ndiwo muenzaniso mutauro ipapo yakanaka. "Shoko ..." anoperekedza pamusoro ngano yekare. Nokuda kukosha kwayo kuti chigadzirwa apinda chikoro hweutungamiri. nyaya dzakawanda uye idioms (semuenzaniso, "achichema Yaroslavny") akava pachena uye rwendo.
Manyoro okutanga atenga nokuda Count Musin-Pushkin muna Yaroslavl wemamongi. Sale kwakaitika nokuti kuti tsika dzechitendero rakavharwa. Nokukurumidza yepakutanga akarasika mumoto, asi nguva ino zvakanzi akaanyora akawanda nzwisisika mazita, vachibvumira yakabudiswa makopi achiripo kusvikira nguva yedu. Zvinokonzerwa "Mashoko ..." rinowanzoshandiswa kuenzaniswa kukosha ngano European Ages bards.
Prince Igor wake rutsigiro pamusoro Polovtsian akava mumwe kucherechedzwa zviratidzo Russia yekare. Rurik pachake, pashure akapukunyuka pakutapwa, akararama kwemakore akawanda. Zvaaiva pakati mhuri yake dzepedyo, akagara nhaka Chernigov, apo akafa muna 1201.
Empire Karla Velikogo - the Rome Second
History of Glass munhoroondo yevanhu. Kugadzirwa uye kugadzirwa regirazi
Nhoroondo guta Ivanovo: Mugore nheyo, zvinokwezva indasitiri
Decembrists muRussia. The kuurayiwa pakati Decembrists. Location uye musi aurayiwe of Decembrists
Bath muRoma yekare: rakasiyana nhaka roumambo kukuru
Nechomumwoyo muna Ayurveda. Cardamom: zvivako anobatsira uye contraindications
Boka "Tsitsi May" - chiratidzo yaitonga
Chii chinonzi nyeredzi?
The kuwedzera pasipoti, apo kutanga?
"Garwe misodzi": phraseologism kukosha, nhoroondo uye mienzaniso
Social pokugara ndiko sei? Social Housing
Vhiki jogirafi kuchikoro: pave mabasa, kuronga uye nekungorora
Rufu Gogol, akabereka yakawanda zvakavanzika
Car zvigaro Aprica: wongororo, mapikicha
Upenyu kwenzanga uye munhu womudzimu
Roller muhwezva - achizorora nzvimbo cyclists, skaters uye skiers
Veblen zvazviri, kana nei tiri safunga kutenga